Huawei agaghị ebido ekwentị ya na HarmonyOS afọ a | Gam akporosis
Emepụtara HarmonyOS izu abụọ gara aga na eze, Huawei ji arụ ọrụ. Mgbe ọnwa nke asịrị gasịrị, akara ndị China hapụrụ anyị sistemụ arụmọrụ nke enwere ike iji ụdị ngwaọrụ niile na ha agaghị ala azụ iji na ekwentị ha, ọ bụrụ na enwere nsogbu na United States.
N'ezie, ọ bụrịrịrị asịrị nke ga abu Huawei mbu jiri HarmonyOS mee ihe, nke e kwuru ga-abata tupu njedebe nke afọ a. N'ikpeazụ, ọ dị ka ọ gaghị adị otu ahụ, na ọ gaghị abata afọ a, mana ụlọ ọrụ anaghị ewepu ịmalite ya na ahịa n'ọdịnihu dị nso.
Huawei ugbu a enweghị atụmatụ iji HarmonyOS na ekwentị ha. Ọ bụ ezie na sistemụ nrụọrụ a bụ ihe ọzọ na gam akporo, nke ị ga-enwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọkachasị nye nsogbu ndị ha nwere na United States n'ọnwa ndị a. Ma atụmatụ ya abụghị iji ya.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị ka a na-egosi ya Akara ndị China dị njikere iji HarmonyOS oge obula. Ya mere ọ bụrụ na enwere nsogbu ndị gbochiri ha iji gam akporo, ha nwere ike ịkwaga na sistemụ arụmọrụ nke ha ozugbo enwere ike. Ihe ga-eme ka ha nwee ike ịga n’ihu n’ahịa.
Ọ bụ ya mere, adịghị ka nke ahụ n'ọdịnihu dị nso Ka anyị lelee ekwentị Huawei na HarmonyOS dị ka sistemụ arụmọrụ. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụghị na Europe. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ na ụlọ ọrụ ahụ na-eme mkpebi ịmalite ya na China (usoro mgbasa ozi dị iche iche na nhọrọ a). Ya mere ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ihe na-eme.
Ihe dị ka ihe doro anya bụ na Huawei nwere ọnọdụ a n'okpuru njikwa. Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị ka ọ bụrụ na ihe emee, ha ga-enwe ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ, na nke a site na iji sistemụ arụmọrụ nke ha, nke, dị ka ha kwuru na nkwupụta ha, ga-arụ ọrụ na ngwa gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ekwentị Huawei na HarmonyOS agaghị abata n’afọ a